Sacuudiga oo si ku meel gaar ah ajaaniibta kaga joojiyay Cumrada
By WARIYAHA RIYADH , GAROWE ONLINE
Dalalka ku yaalla Yurub iyo Latin America ayuu gaarey cudurka, waxaana halistiisa ay kusii faafaysaa aduunka oo dhan.
RIYADH - Boqortooyadda Sacuudiga ayaa maanta oo Khamiis ah ku dhawaaqday inay joojisay Fiisooyinkii ay usoo saari jirtay dalka ajnabiga ah ee Cumrada u tagi jiray magaalooyinka barakeysan ee Makka iyo Madiina.
Go'aankan ayaa loo sababeeyay cudurka Coronavirus oo kusii baahaya caalamka, iyadoo 220 kiis dad qabo xanuunka lagu arkay dalal ku yaalla bariga Dhexe, oo ay kamid yihiin Kuwait, Iran iyo Iran.
Dowladda Sacuudiga ayaa dhanka kale kula talisay muwaadiniinteeda inaysan u safrin dalalka laga soo sheegay Coronavirus, waxaana ay sare u qaadey heerka feejignaanta ee cudurkan halistiisa ku faafayso Asia, Europe, Latin America iyo Africa.
Xanuunka Coronavirus ayaa laga cabsi qabaa inuu saameyn ku yeesho Xajka sanadkan 2020, oo bilooyin ay ka harsan tahay.
Sanadkii 1865-tii, cudurka Daacuunka oo ka dilaacay Sacuudiga ayaa dilay 15,000 oo xujay ah.
Coronavirus ayaa kumanaan kun oo qof ku dilay China, halkaasi oo ah meeshii ugu horeysay ee lagu arkay December 2019, iyadoo hadda laga soo sheegayo inuu cudurka gaarey Brazil, Norway, Italy, Estonia, Denmark iyo Georgia.
Iran oo ay ku nool yihiin 80 milyan oo qof, ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu fara ba'an ku hayo Coronavirus, iyadoo saraakiisha caafimaadka ay sheegeen inuu dilay in ka badan 24 qof, islamarkaana uu soo ritay boqolaal uu ku jiro wasiirk ku xigeenka caafimaadka dalkaasi.
Maxkamadda boqortooyadda ayaa ku dhawaaqday inuu dhintay amiirka.
Farmaajo oo ku wajahan Sacuudiga iyo wafdi hordhac ah oo kahor maray
Soomaliya 29.05.2019. 12:10
Coronavirus: Astaamihiisa, habka uu ku faafo iyo sida looga hortaggo
Maqaalo 05.03.2020. 15:43
Yuusuf Garaad oo ka hadlay go'aanka maamullada [Dhageyso]
Soomaliya 28.09.2017. 11:46
Madaxweynaha dowladda Puntland oo magacaabay wasiir ku xigeen 04.06.2020. 18:32
Dowladda Soomaaliya oo shaacisay kiisas horleh oo ah fayruska Corona 04.06.2020. 18:26
Boosaaso: Qoys loo xukumay ilmo lasoo xaddey oo gurigooda ku dhintay 04.06.2020. 15:03